နယူးယောက် ကားပြပွဲမှာ မြင်တွေ့လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai Elantra N ! – MyMedia Myanmar
သီးသန့်ချပြခဲ့တဲ့ Teaser တစ်ချို့ကို မြင်ရအပြီးမှာတော့ Hyundai Elantra N ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်လောက်ကပဲ စတင် ထုတ်ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ ကားကတော့ Honda Civic Si ဆိုတာ ထက်စာရင် Sports Sedan ကား အသစ် တစ်စီးနဲ့တောင် ပိုတူလာတာ ပါ။ အခုဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ အဆိုပါ ကားကို Metal နဲ့ ပိုအဆင့်မြှင့်ဖို့ လိုလာပြီဖြစ်တာကြောင့် အဆိုပါ မြန်နှုန်းမြှင့် Elantra ကို တော့ မြောက်အမေရိက မှာ အခုလထဲပဲ စတင်မြင်တွေ့လာရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အခုကျင်းပနေတဲ့ နယူးယောက် နိုင်ငံတကာ ကားပြပွဲ ကြီးထဲမှာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ အရင်ကထက် ပိုပြီး နှစ်ဆလောက် ဒီကားနဲ့ ဒီပွဲက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေခဲ့ တာ ဖြစ်ကာ အကြောင်းကတော့ ဒီကားက တကယ့်အကြိုက်တွေ့စရာ ဖြစ်သလို အခုချိန်မှာ လိုက်ကြည့်စရာ ကားပြပွဲတွေ လည်းများများ စားစား မရှိတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
အဆိုပါ ကားပြပွဲ ကတော့ မနှစ် တုန်းက ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ပိုဆိုးလာတာ ကြောင့် လုံးဝကို မကျင်းပဖြစ်ခဲ့ ရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း နောက်ပိုင်း ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ဖို့ ရက်သတ်မှတ် တာ ကိုပဲ အတော်လေး အချိန်ယူ စဉ်းစားနေခဲ့ ကြရပါသေးတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ သိပ်အကြာကြီး မစောင့်ဆိုင်းလိုက်ရပဲ အဆိုပါ ကားပြပွဲကြီးကို အခုနှစ် ဩဂုတ် လ ၂၀ ကနေ ၂၉ အထိ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Elantra N အကြောင်း ဆက်ရမယ် ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ ကားသစ်ကို ၁၉ ရက်နေ့ ကအရှေ့ပိုင်း ဒေသ စံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၄၅ မှာ စတင် ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ ရရှိနိုင်သမျှထဲ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်မား ဆုံးသော N Brand Level အဆင့်တစ်ခုကို ချပြနိုင်ခဲ့ပြီး 2.0 Liter Turbocharged Flat Power အင်ဂျင် နဲ့အတူ 276 hp နဲ့ 298 lb-ft Torque အထိလည်း စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေက အားလုံး သိထားပြီးသားပါ။ အခု ဒီပွဲ ကနေ အဓိက မြင်ချင်သိ ချင် ကြတာကတော့ ကားကို ပိုမောင်းလို့ ကောင်းသွားအောင်အဓိက ဆွဲဆောင် နေကြတဲ့ နည်းပညာ တွေ အကြောင်းပါပဲ။
ဒီကားကို အနည်းငယ်စီ စတင်မိတ်ဆက် ပြနေတုန်းကတော့ Hyundai အနေနဲ့ ကားရဲ့ Digital Silhouette ကို ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စာလုံး အတိုကောက်တွေ အများအပြားသုံးကာ NTS၊ DCB၊ LBD၊ NSE နဲ့ အစရှိ သဖြင့် အများကြီး ချပြခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အတော်များ များကတော့ ဒီ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို သိချင်နေခဲ့ကြတာ ကြာပါပြီ။ အခုတော့ အဆိုပါ စကားလုံးတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ELSD ကို သိလိုက်ရပြီ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါကတော့ Electronic Limited-Slip Differential ဆိုတဲ့ ဘရိတ်စနစ် အကြောင်းပါပဲ။ နောက်ထပ် သိရဖို့တွေ အတွက်ကတော့ ထပ်စောင့်ပါဦးလိုပဲ ပြောရဦးမှာပါ။ ကားရဲ့ စတင်ရောင်းချမယ့် နေ့တို့အပြင် ဈေးဘယ်လောက် ကနေ စတင သင့် မယ် ဆိုတာတွေ အတွက်လည်း မျှော်နိုင်သမျှတော့ မျှော်ဦးလေ ဆိုသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်လထဲမှာတော့ ဒီထက် ပိုပြီးအာရုံစိုက် မျှော်လင့်ကြစေချင် ပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကားအပါအတင် ဒီပွဲကြီးထဲက ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ တင်ဆက်ပေး နိုင်ဖို့ အားလုံးက ကြိုးစားနေကြလို့ပါပဲ။
The post နယူးယောက် ကားပြပွဲမှာ မြင်တွေ့လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai Elantra N ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-01T14:01:07+06:30August 1st, 2021|MYCARS MYANMAR|